Iimbali kubantu abadala, i-18 kunye nokubukela kwi-intanethi - ngaphandle kokubhalisa
Ibali kubantu abadala
Inkcazo yefestile yabantu abadala: imbali ixutywe ewadi apho abantu abakhulu bafihla khona, ngenjongo yoqhagamshelwano lwezesondo. Ngaphezulu kwevidiyo, abaculi bevela eWarsaw bazama, bazisa ubungqina obuqilileyo kunye nabangasese bengasese, ngokwakhiwa kwemifanekiso engabonakaliyo kwisiseko apho i-anime yadalwa. Idata ibonise ukuba inxalenye ebalulekileyo yababhalisi bee-portal abasebenzisi abakhulu, banqwenela ukubukela ividiyo ngexesha elingenamsebenzi ukusuka kulo msebenzi.
eyona > 18 + > Ibali kubantu abadala
Jonga iindaba zeentlobo zabantu abadala-kwi-intanethi kwifowuni yakho yeselula
Kukhohlakele ukuphosa ubunzima xa unokukhuphela iipatto ezidala. Ubulili obuqhelekileyo bubonakala ngathi i-prank yengane, imbali yebalinganiswa yonakalisiwe kumda. Ukuzonwabisa uKarlson, oye wakhulelwa ukuba abambe ingqungquthela engabonakaliyo i-Freken Bock, vula i-trunk yakho uze ubangele imilingo!